नेताज्यू,तपाईं पनि सार्वजनिक सवारीमा ? - Dainik Nepal
मंगलबार, ८ जेठ २०७५
नेताज्यू,तपाईं पनि सार्वजनिक सवारीमा ?
निर्मल भट्टराई २०७४ साउन २८ गते ८:०७
म माईतीघरबाट भक्तपुर फर्कदैं थिएँ । बसस्टपमा बनेपा—धुलिखेल जाने बस घ्याच्च माईतीघर बसस्टपमा रोकियो । म चढें । सबभन्दा पछाडिको एक सीट खाली रहेछ । म धावकीय गतिमा दौडेर सो सीटमा बसें । केही यात्रुहरुले चिनेकोजस्तो गरेर मतिर हेरे । एउटा कालो मास्क लगाएको मभन्दा अगाडिको सिटमा बसेको अधबैंशे मतिर फर्केरमुसुक्क हाँस्यो ।
मैले नमस्कार फर्काएँ । मलाई किन हो कुन्नि नेताज्यू भनेर सम्बोधन गरेको त्यति मन पर्दैन । लोकतन्त्रको लागि, सामाजिक परिवर्तनको लागि आफूले सकेको योगदान गरेको हो । जहीं तहीं नेताज्यूको मान पदवी मेरा लागि सौखको विषय होईन, बोझको विषय हो । फेरि निधार र आँखाको भरमा मैले उसलाई चिन्नसकेको अवस्था थिएन । म असमन्जस्यमा परें ।
उसले मास्क तल सार्यो र अनुहार मतिर फर्कायो ।
“नेताज्यूले मलाई चिन्नु भएन क्यारे । सम्झनुस् त एकपकट ”
“मैले तपाईंको नाम खुट्याउन सकिन”—मैले भनें ।
“चुनाव सकिएपछि त नेताले कसलाई सम्झन्छन् र ? सबै नेता उस्तै त हुन् नि !” उसले आक्रोश पोख्यो ।
उसको अगाडि निरीहता प्रकट गर्नु बाहेक मसँग कुनै विकल्प थिएन । वरिपरि बसेका यात्रुहरु उसकै समर्थनमा रहेको भाव दर्शाउदै थिए ।
यस्तो लाग्दथ्यो मानौं मैले कुनैबेला भेटेको त्यो यात्रुलाई नचिन्नु मेरो अपराध थियो ।
“म सागाँको गोकुल क्या”—उसले भन्यो ।
“ए अँ हगि म त कस्तो हुस्सु भएको ? तपाईं र मेरो धेरै बर्ष पहिले तपाईंकै टोलमा एउटा भेलामा भेट भएको होइन ?” मैले सम्झें ।
“अँ त्यो दिन तपाईंले मेरो घरमा खाना खाएको होइन ?”
“हो,” मैले त्यो प्रशङ्ग नसम्झिए पनि सम्झिएको अभिनय गरें ।
“अनि आज त सार्वजनिक सवारीमा चढ्नु भएछ । आज आफ्नो गाडी चाँहि कता गयो नि ?”
“मेरो निजी गाडी छैन । म सधैं सार्वजनिक सवारी साधनमा यात्रा गर्छु”—मैले भनें ।
“सिंहदरवारको त्यत्रो उच्च ओओदामा पुगेको मान्छे, एउटा नाथे गाडी पनि किन्ने पैसा पनि कमाउन सक्नु भएन ? तपाईंले राजनीति गरिखानु हुन्न ?” उसले निष्कर्ष सुनायो ।
“म गाडी र महल जोड्ने पैसा कमाउन राजनीतिमा लागेको होईन”— मैले पनि आफ्नो निष्कर्ष सुनाएँ ।
“ पुरानो आदर्श, नैतिकता र इमान्दारीले अब राजनीति गर्न सकिन्छ र नेताज्यू ?” उसले ओठ लेप्र्यायो ।
“नैतिकता, आदर्श र इमान्दारी पनि नयाँ र पुरानो भन्ने हुन्छ र ? ” मैले प्रतिप्रश्न गरें ।
“भनेर के हुन्छ र नेताज्यू ? तपाईंभन्दा धेरै पछि राजनीतिमा आएका तपाईंको पार्टीमा आएका नेताले ओहोदामा रहँदा गाडी बङ्गला जोडेको कसले देखेको छैन र ? उनीहरुको कत्रो शान कत्रो रवाफ । तपाईं त ख्वै”—उसले ‘सहानुभूतिपूर्वक’ मेरो शीरदेखि तीरसम्म निहाल्यो ।
बानेश्वरको जामबाट गाडी अगाडि बढ्न सकेको थिएन । मलाई त्यो साथीसँग चाँडोभन्दा चाँडो छुट्न मन थियो । समय कटाउन मैले उसलाई एउटा हीरा खाने मुसाको कथा सुनाउन थालें ।
“एउटा हीरा पसलमा कुनै बेला एउटा मुसो पसेछ । मुसाले हीरा खाएर हैरान पार्न थालेछ । हीरा पसलेले हीरा खाने मुसा पत्ता लगाउन एक व्यक्ति नियुक्ति गरेछ । उसले घर भरिका सबै मुसालाई एउटा कोठामा जम्मा पारेछ । एउटा मुसो चाँहि मुसाहरुको समूहभन्दा छुट्टै बस्दथ्यो । उसको चाल डाल अरु सबै मुसाभन्दा फरक थियो । त्यो व्यक्तिलाई हीरा खाने मुसा पत्ता लगाउन अप्ठ्यारो परेन । ”
“मतलव मलाई देशको हीरा (राजश्व) खाएर अलग्गै बस्नु छैन । जनताभन्दा छुट्टै शान र रवाफमा बाँच्नु छैन । मेरो जीवनको लक्ष्य त्यो होइन । विल्कुल होईन । ”—मैले प्रष्ट्याउन खोजें ।
“खै के खै के ?” ऊ मसँग सहमत देखिएन ।
बस सूर्यविनायक पुग्यो । गोकुल र म छुट्टियौं । म एउटा प्रशिक्षण कार्यक्रममा जानु थियो । एक घागडान नेताले ‘असल नेतामा हुनुपर्ने गुणहरु’ विषयमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम थियो । उनको धारा प्रवाह प्रवचन शैली लोभ लाग्दो थियो । उनले भियतनामी कम्युनिष्ट नेता होचिमिन्हको असल नेता काम गर्ने बेला जनताको अगाडि र खानेबेला जनताको पछाडि बस्नुपर्छ भन्ने भनाई सुनाए । सबैले ताली बजाए ।
कार्यक्रम पछि जलपानको आयोजना गरिएको थियो । सहभागीहरु लाईन लागेर जलपानमा सहभागी हुदैथिए । सहभागीले खानु अगावै नेताहरुलाई मञ्चमै पकवान टक्र्याई सकिएको थियो ।
भूकम्प पीडितको नाममा उठाइएको चन्दाको पारदर्शीताबारे उब्जिएका केही सवालहरु
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले यसरी पायो संजिवनी बुटी
ओलीको दूरदृष्टि र प्रचण्डको कार्यकुशलता
मदन भण्डारीको हत्या कि दुर्घटना सम्माननीयज्यू ?
वामदेव गौतमले पाउने भए महत्वपूर्ण सरकारी जिम्मेवारी
नेकपाको बैठकमा कडा रुपमा प्रस्तुत भए झलनाथ, ओली र प्रचण्ड चुप
नेकपाको पहिलो सचिवालय बैठक सकियो, यस्ता छन् निर्णयहरु
ओलीलाई झट्का: भीम रावल ‘फायर’, अचानक किन पुगे बालुवाटार ?
रामग्राम र बाओजी सिटीबीच भगिनी सम्बन्ध
धेरै चम्किन खोजे बर्खास्त गर्ने तयारीमा प्रधानमन्त्री ओली, बिखण्डनकारीसँग साँठगाँठ
प्रधानमन्त्री ओली असार ५ गते चीन भ्रमण जाने
यी हुन् मलेसिया जाने कामदारलाई ठग्ने ४० व्यावसायी, एक-एक गरी कारबाही (सूचीसहित)
लुनकरणदास गंगादेवी चौधरी साहित्य कला मन्दिरद्वारा सात स्रष्टा सम्मानित
नेकपाका ४ सय ४१ केन्द्रीय सदस्यको नाम सार्वजनिक, को-को परे ? (हेर्नुस नाम)
सुन डन गोरे गृह मन्त्रालयमा सार्वजनिक, विराटनगर लगियो
प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको तीन दिनमै भारतले हटायो विराटनगरको फिल्ड अफिस
अपडेट : चुडामणि उप्रेती गोरे पक्राउ, साढे १२ बजे छानविन समितिले सार्वजनिक गर्ने
ब्रेकिङ : सनम हत्या र सुन तस्करीका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरे भारतबाट पक्राउ
दोस्रो युवा कृषिउद्यम सम्मेलन सम्पन्न
© २०१७ सर्वाधिकार सुरक्षित दैनिक नेपाल टिम